Orestiada Centre Deluxe Apartment - I-Airbnb
Orestiada Centre Deluxe Apartment
I-wifi ekhawulezayo ye-191 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
IiApartments zethu ezisi-7 zeDeluxe eOrestiada zibonelela, iWiFi ekhawulezayo eyi-200mbps, iTV yeSatellite (iitshaneli zaseYurophu-jikelele), indawo egqunywe ngasemva enezixhobo zokuQinisekisa kunye neBBQ. Amagumbi afanelekileyo kumagosa e-FRONTEX.Iindlu zethu ezipholileyo ezisembindini, zixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo nantoni na onokuyidinga. Singanikezela nge-4X4 Rent iMoto kumagosa e-FRONTEX ukuze aPatrolling kunokwenzeka (kuxhomekeke kubukho). Ngokuchanekileyo i-100 yeemitha ukusuka kwiziko le-Orestiada Square. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane siseAlexandroupolis, iikhilomitha ezingama-90 ukusuka kwipropathi.
Ifenitshala emitsha, iibhedi ezisemgangathweni, ii-cushion ezahlukahlukeneyo, amalaphu amahle kunye nezinto zeshawari ziya kukunika imvakalelo yokuhlaliswa kweenkwenkwezi ezintlanu. Enye debroom kunye King ubukhulu ibhedi extra enkulu. Iitawuli ezintsha ezikumgangatho ophezulu, ijeli yeshawa, iconditioner, isomisi seenwele nokunye okuninzi. Isantya se-wifi esikhawulezayo 200Mbps.
Umatshini wokuhlamba, ifriji enkulu.Ikhethekileyo ilungiswe yaza yaphuculwa kubasebenzi beFrontex.
Uhlaziyo lwe-COVID-19: Umgangatho ophezulu (umgangatho kunye nawo wonke umphezulu) ucocwa ngabasebenzi bokucoca phambi kwenkangeleko yondwendwe.
Kwisakhiwo esinye, kuhlala iintsapho ezimbini ezinobuhlobo. UNikos, uGiouli, u-Iouliana kunye nam (Dimitrios) siya kukunceda kuyo yonke into oyifunayo! Silusapho kwaye sinceda kuyo nayiphi na ingxaki ebangelwe :)
Icocekile kwaye ikhuselekile indawo yethu yedeluxe kwiziko le-Orestiada, eyona ndawo ithuleyo, ikhuselekile kwaye intle kwiziko le-Orestiada, i-1 min. hamba uye kuZiko. Ngaphezulu kweBhanki, Ivenkile enkulu, indawo yokubhaka, iindawo zokutyela kunye neekhefi 1 min.
Sinokukunceda ulungelelanise ukuhlala kwakho kwingingqi, ukukunika ulwazi oluluncedo malunga neendawo zokutyela kunye nekhitshi yamaGrike.
Iiflethi ezi-5 zeDeluxe kumbindi weOrestiada, kodwa Ngaphandle kwengxolo. Iindlu zethu ezi-5 ezipholileyo zixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo nantoni na onokuyidinga. Le yintsapho yanamhlanje kunye nesakhiwo esikhuselekileyo kumbindi weOrestiada.
Igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala, Ikhitshi lokutyela elinomnyango okhuselekileyo kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Iglasi kabini systm Volkswagen window kunye Ukupholisa-Ukufudumeza.
I-elevator yabantu abaneemfuno ezizodwa.
Relax kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho ngasese. Indawo efanelekileyo kuMda waseYurophu kunye ne-Arhente ye-Arhente ye-Arhente ye-Frontex Abasebenzi.
I-wifi ekhawulezayo – i-191 Mbps
Konke kwindawo enye xa uhlala kwiziko.
Iindawo zokutyela kunye nebar yasebusuku kuphela ngomzuzu omnye. Icocekile kwaye ikhuselekile indawo yethu yedeluxe kwiziko le-Orestiada, eyona ndawo ithuleyo, ikhuselekile kwaye intle kwiziko le-Orestiada, i-1 min. hamba uye kuZiko. Ngaphezulu kweBhanki, Ivenkile enkulu, indawo yokubhaka, iindawo zokutyela kunye neekhefi 1 min.
Kwisakhiwo esinye, kuhlala iintsapho ezimbini ezinobuhlobo. UNikos, uGiouli, u-Iouliana kunye nam (Dimitrios) siya kukunceda kuyo yonke into oyifunayo! Silusapho kwaye sinceda kuyo…
Inombolo yomthetho: 00001095650